Kuteterera Munamato Usati Waparidza Izwi raMwari | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Kuteterera Munamato Usati Waparidza Izwi raMwari
Mabasa 6: 7:
7 Uye shoko raMwari rakawedzera. uye vadzidzi vazhinji vakawedzera paJerusarema; uye chaunga chikuru chevapristi chakateerera rutendo.
The izwi raMwari ndiyo waya yehupenyu yemuKristu wese Izwi raMwari chikafu chedu chemweya chinoita kuti tikure munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu. Nhasi uno tichave tichiita munamato wekureverera tisati taparidza shoko raMwari. Munamato wekureverera uyu unofanirwa kunamatirwa vafundisi, kuti vaendese nenzira yakafanira shoko raMwari kuungano yavo. Izvi munyengetero wekureverera zvinofanirawo kugadzirwa kune vatendi vari mumunda wemamishinari vachiparidza izwi raKristu kumweya yakarasika. Tinofanira kunyengetera kuti semushumiri kune vatadzi nezverudo rwaJesu Kristu, ngavatongerwe zvivi zvavo vagamuchire Jesu saIshe wavo uye Muponesi.
Kana isu tichida kuona masasi ruponeso yemweya mumakereke medu uye muumambo hwaMwari, isu tinofanirwa kureverera kuti izwi raMwari riwane nzira yakasununguka uye ikudzwe pakati pedu, 2 VaTesaronika 3: 1. Kana izwi raMwari ranyoro, mhomho ichaungana, mubhuku raMabasa 13:44, rinenge guta rese rakaungana kuzonzwa izwi raMwari. Izvi zvinongoitika kuburikidza nesimba remunamato wekureverera. Naizvozvo, tinofanira kusimuka uye kureverera vafundisi vedu, vafundisi uye mamishinari ari mumunda. Tinofanira kunamatira kuti Mwari avape iwo mashura kutaura pavanenge vachiparidza izwi, isu tinofanira kunyengetera kuti nepo tichiparidza iro shoko raMwari, Mwari amene ngaasimbise izwi rake kubva ipapo muromo nezviratidzo nezvishamiso, zvinozotungamira kuponeswa kukuru kwemweya kuna Humambo hwaMwari.
Shamwari inodikanwa, ndinokukurudzira kuti ubatanidze munamato yokureverera nhasi, ngatiregererei neshungu, sezvatinoita, tichaona Mwari vachiita mabasa esimba kubudikidza neshoko rake mumazuva ano ekupedzisira muzita raJesu. Ameni.
1. Baba, muzita raJesu, ndinokutendai nekutumira Shoko renyu nesimba pamusoro pemakore, nekudaro muchiita iyi Chechi nzvimbo yemafuro akasvibira umo vatsvene vanogashirwa zvakanaka nekusimbiswa.
2. Baba, muzita raJesu, rega Shoko renyu ratumirwe rirambe richibuda kubva kuatari yeChechi ino, zvichikonzera kupora uye kununurwa mune zvese zvemasevhisi edu gore rino rose.
3. Baba, muzita raJesu, rambai muchitumira Shoko renyu nesimba mumasevhisi edu ese gore rese, muchiita Kereke ino mafuro manyoro uko iro gwai rakafudzwa uye rakasimbiswa.
4. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu chesimba rinozosimbisa kutonga kwevatsvene gore rino.
5. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeShoko renyu rechaunga-inounganidza iro rinozopaza guta rose muChechi ino gore rino.
6. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu rinoita zvishamiso, nekudaro muchiedza kunyora vanhu vazhinji kuChechi ino gore rino.
7. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu reuchenjeri iro rinoisa zvinoshamisa zvemashura, nekudaro zvichikwevera vanhu vazhinji vanopinda muChechi ino gore rino.
8. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu rinovhenekesa iro rino simbisa masimba edu pamusoro pesimba rerima rose gore rino.
9. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu rekururama rinotsvenesa, nokudaro tichisimbisa hupenyu hwedu hweMweya mumatanho anotevera gore rino.
10. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu rinosimudzira hupenyu gore rino rinozoisa simba redu pakurwara nezvirwere, nokudaro zvichikwevera vanhu vazhinji kuumambo.
11. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira Shoko renyu muzvikamu zvakawandisa gore rino, zvichitungamira mukukura kweChechi ino.
12. Baba, muzita raJesu uye nesimba reIzwi renyu, simbisai vatendeuki vedu vese mukutenda uye muChechi ino gore rino.
13. Baba, muzita raJesu, zvese zvipenga zvevakaroorwa ngazviparadzwe na
simba reIzwi rako pakati pedu seChechi gore rino.
14. Baba, muzita raJesu, ita kuti Izwi renyu rikure zvine simba mukati medu gore rino, nekudaro tichisimbisa hutongi hwedu pasi pano seChechi uye sevanhu.
15. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeshoko renyu rakanaka rinozounza zvinoshamisa zvirevo zvevanhu Vako gore rino.
16. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu rinogara riripo rinosimbisa kutonga kweMwina wese gore rino.
17. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeIzwi renyu renyasha rese gore rino rinozoisa mukana wekupiwa nhaka yeWinner wese.
18. Baba, muzita raJesu uye neMweya weNyu, ipai mashura mashura muIzwi kunhengo dzese dzeChechi ino, zvichikonzera kushomeka kwemweya muhupenyu hweWinner wese gore rino.
19. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira moto weIzwi renyu kuti upise chero hura huri muhupenyu hwenhengo yeChechi ino yose gore rino.
20. Baba, muzita raJesu, ramba uchitumira isu Izwi rako rekubhuroka rinozovhura zvitsauko zvitsva kunhengo yeChechi ino yose gore rose.
21. Baba, muzita raJesu, ramba uchitumira isu Izwi rako rinovandudza hupenyu iro richamedza rufu mukukunda muhupenyu hwese hwenhengo yeChechi ino gore rose.
22. Baba, muzita raJesu uye nesimba reMweya Mutsvene, rambai muchitumira isu Chiporofita Izwi rinozodzoreredza kuregererwa kwakazara kwemunamati wese wese gore rino.
23. Baba, muzita raJesu, tinosimudzira kuburitswa kweIzwi nyowani uye rinochinja hupenyu mumasevhisi edu ese, ayo anounganidza nekuchengeta huwandu muChechi ino gore rese.
24. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira mvura yeShoko renyu rinoshandura hupenyu, nekudaro muchigadzika vatendeuki vedu vese vatsva uye nhengo nyowani mukutenda uye muChechi ino yose mukati megore.
25. Baba, muzita raJesu, mataurire zvirevo zveumwari ngazvipiwe kune vafundisi, zvichitungamira mukukura kunoshamisa kweChechi ino gore rose.
26. Baba, muzita raJesu, ngakuitwe kuenderera mberi kweIzwi kuburikidza nevafundisi vedu gore rino, zvichitungamira mukukanganisa kwaro muhupenyu hwenhengo dzese.
27. Baba, muzita raJesu, ngapave nekuwedzera kweIzwi kubva kuatari yedu yose gore rino, zvichikonzera kukura kweChechi uku.
28. Baba, muzita raJesu, zivisai Shoko chairo kuvanhu Venyu mumushando wese gore rino, zvichikonzera kupindurika kwazvinoreva kune wese anonamata.
29. Baba, muzita raJesu, rambai muchititumira Izwi renyu mumwaka wese muhushumiro hwese gore rino, zvichikonzera kuzorora kwese-kwese kune wekunamata.
30. Baba, muzita raJesu uye neMweya Mutsvene, itai kuti Izwi renyu riwane nzira yakasununguka uye rikudzwe pakati pedu muzviratidzo nezvishamiso zvese gore rino.
Previous nyayaKunyengeterera Kunamatira kweEvangeri
inotevera100 Kununurwa Munamato Kubva Kune Njodzi Zvibvumirano
Luís Jiménez Kukadzi 21, 2021 At 12:47 am
Muy unokosha oraça pidiendo intercepción
Minamato Inopesana neRoto Kusvibiswa
Kunamata Kunongedzera Kwakagadziridzwa Pfungwa